Bengali Rohingya Terrorist Attack in Arakan, June 2012: စိုးရိမ်ကြောက်ရွံ့မှုကြောင့် ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ စားဝတ်နေရေးခက်ခဲနေ
မောင်တောမြို့နယ် အမှတ်(၆) ၊ ၄-မိုင် ငွေတောင်ရွာ အုပ်ချုပ်ရေမှူးက “ ယခု အချိန်မှ ကျနော်တော့ရွာသားတွေဟာ၊ တလန့်လန့်၊ တဖြန့်ဖြန့်နဲ့ အလုပ်အကိုင် မလုပ်ဝံ့ဖြစ်နေကြတယ်၊ ကုလားတွေက တောထဲမှာ ရောက်နေကြတယ်၊ မနေ့ကလည်း ကျနော်တို့ရွာက လယ်ထဲကို သွားတော့ ကုလားနဲ့တွေ့တာနဲ့ ပြန်ပြေးလာရတယ်၊ ရွာက လယ်သမား ၁၅ဦးမှာလည်း ပျိုးခင်းချထားတာ၊ သွားပြီးတော့ မလုပ်ရဲဖြစ်နေတယ်၊ တောင်ယာလုပ်တဲ့သူတွေလည်း တောင်ယာကို မသွားရဲဖြစ်နေကြတယ်၊ ကျပန်းလုပ်တဲ့သူတွေမှာလည်း အပြင်မှာသွားပြီး မလုပ်ရဲ၊ ရွာသားတွေ တော်တော် စားဝတ်နေရေးခက်ခဲနေကြပါတယ် ” ဟု သူကပြောသည်။
Copyright © 2011. Bengali Rohingya Terrorist Attack in Arakan, June 2012: စိုးရိမ်ကြောက်ရွံ့မှုကြောင့် ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ စားဝတ်နေရေးခက်ခဲနေ . All Rights Reserved